Ny minisiteran'ny fahasalamana Belize dia nanambara tranga voalohany an'ny COVID-19
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny minisiteran'ny fahasalamana Belize dia nanambara tranga voalohany an'ny COVID-19
The Ministeran'ny fahasalamana any Belize manambara ny tranga voamarina voalohany an'ny Covid-19 ao amin'ny firenena. Ny marary dia vehivavy 38 taona, teratany belizean monina any San Pedro.
Tonga tany Belize ny marary tamin'ny alakamisy 19 martsath, ary nitady fitsaboana tany amin'ny tobim-pahasalamana tsy miankina misy soritr'aretina ny zoma 20 martsath. Ny tantaram-pitetezana nataony tato ho ato dia mampiseho fa avy tany Los Angeles, Kalifornia izy ary namakivaky an'i Texas. Miorina amin'ity tantaram-pitsangatsanganana ity sy ireo soritr'aretina nasehony, dia nampandrenesina ny rafitry ny fahasalamana Belize ary nanomboka ny fizotrany sy ny protokolony. Ny fitandremana ilaina rehetra dia noraisina tamin'ny faran'ny Minisitera.
Ny santionany dia namboarina ho an'ny viriosy gripa hafa ary ny fizahana voalohany ny COVID-19 dia natao niaraka tamin'izany. Voamarina fa tsara ho an'ny COVID-19 tokony ho tamin'ny 10:45 alina ny alahady 22 martsa teond.
Ny aretin'ilay marary dia toa mifandraika amin'ny dia ary ny dingana ilaina dia ilaina mba hitazomana ny fielezan'ny fiarahamonina. Ny fepetra voalohany dia ahitana:
Fandefasana ekipa fahasalamana roa any San Pedro hanohy ny fampiharana an-tsarintany ireo mpifanerasera mety rehetra;
Ny fanondroana sy ny fitadiavana fifandraisana amin'ny fotoana mety ho an'ny olona rehetra mety hampiharihary; ary
Fanovana ny asa ara-pahasalamana ao amin'ny Polyclinic San Pedro.
Ho fanampin'ny fameperana efa napetraka, ny governemantan'i Belize izao dia hametra ny fameperana sy ny tolo-kevitra ho an'ireo mponina / tsy mponina ao amin'ny nosy San Pedro hisorohana ny fiparitahan'ny fiarahamonina.
Mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, ny Ministeran'ny Fahasalamana dia hiroso amin'ny fampandrenesana ny World Health Organization sy ny Pan American Health Organization amin'ny alàlan'ny sehatra International Health Regulations.
Amin'izao fotoana izao, ny ekipa mpanara-maso dia mbola manao famotopotorana amin'ny marary hamaritana ny haavon'ny fifandraisana mety ho nataony tamin'ny olona hafa. Ireo olona ireo izao dia mety hitokana, hosedraina ary harahi-maso akaiky mandritra ny 14 andro, ary mety misy quarantine tsy maintsy atao.
Manohy manadihady sy manao tatitra ny minisitera raha misy tranga ahiahiana. Misy hatrany ny fanaraha-maso ny fidiran'i Belize, ary ny fandinihana sy fanitsiana ny fomba na ny protokol mba hanamafisana kokoa ny fomba fisorohana sy ny fisorohana, miziriziry amin'ny fomba fitokantanan-tena sy ny quarantine tsy maintsy atao arak'izay ilain'ny tranga.
Amin'izany ny besinimaro dia atoro hevitra mba ho tony hatrany ary hanaraka hatrany ny hafatra fisorohana ilaina rehetra. Manohiza manasa tanana matetika amin'ny savony sy rano madio, manarona ny vava rehefa mikohaka sy mievina, ary mba tsy hifandray akaiky amin'ireo marary. Ny olona rehetra manana soritr'aretina toy ny gripa dia asaina mijanona ao an-trano, mitokantokana, ary miantso ny laharam-pifandraisana amin'ny 0-800-MOH-CARE raha mila torolalana fanampiny.